UNICEF Myanmar: April 2016
သားဖွားဆရာမတစ်ဦး၏ ဇာတ်လမ်း - မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းရှိ အစွန်အဖျားကျသော ရွာလေးများရှိ ပြောင်းလဲလာသော ဘ၀များ
ကက်ဇာလျန်နှင့် မိုဟာမက်ဘက်ဒရူလ် ဟက်ဆန်ရေးသားသည်
ရန်ကုန်မှ ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀ အကွာတွင်ရှိပြီး ဟားခါးမြို့နှင့် ကီလိုမီတာ ၂၀၀ အကွာရှိ ကျေးရွာလေးတွင် အသက် ၄၉ နှစ်ရှိ ဒေါ်ကစ်မော်ဝီမှာ တစ်ဦးတညသော သားဖွားဆရာမဖြစ်သည်။
ဒေါ်ကစ်မော်ဝီရဲ့အလုပ်က မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းက အစွန်အဖျားကျေးရွာလေးတွေကို လှည့်လည် သွားလာရန် လိုအပ်ပေသည်။ အသက် ၄၉ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးသည် သောင်းလန်း ကျေးလက် ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ (SRHC)က တစ်ဦးတည်းသော သားဖွားဆရာမဖြစ်သည်။ ယင်းရွာမှာ ချင်းပြည်နယ်၏ မြို့တော် ဟားခါးနှင့် ကီလိုမီတာ ၂၀၀ ဝေးပြီး ရန်ကုန်မြို့နှင့် ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀ ဝေးသည်။
Labels: Chin, communities, Hakha, health, midwife
Story ofaMidwife: Changing Lives in Remote Villages in Western Myanmar
By Kap Za Lyan and Mohammad Badrul Hassan
Daw Kip Mawi, 49 years old, is the only midwife from her village, located 200 kilometres away from Hakha, which in turn is 1000 kilometres away from Yangon.
©UNICEF Myanmar/2016/ Mohammad Badrul Hassan
Daw Kip Mawi’s work requires her to move constantly between remote villages in Western Myanmar. The 49 year old woman is the only midwife from Thong Lang Sub-Rural Health Centre (SRHC),avillage 200 kilometres away from Hakha, the capital of Chin State, which in turn is 1000 kilometres away from Yangon.
ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းကြောင့် စာသင်ခန်းများ ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ပြုံးပျော်ရွှင်သော မျက်နှာများကို တွေ့ရှိရသည်
ကျောင်းဆရာမ ဒေါ်ဝင်းနွယ်စိုးက ၁၀နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားများကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစာစောင်ကို ရှင်းပြနေစဉ်
“အဲဒီလို ရေကြီးတာမျိုး ကျွန်မတို့ဒေသမှာ တစ်ခါမှမဖြစ်ဖူးခဲ့ဘူး” ဟု ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်း မြို့နယ်၊ နွားတောင်းရွာက မူလတန်းပြဆရာမ ဒေါ်ဝင်းနွယ်စိုးက ပြန်ပြောင်းပြောပြသည်။
Labels: Cyclone, Education, Flooding, hygiene, Japan support, UNICEF Myanmar, WASH
School renovation provides better learning spaces and happy faces
School teacher Daw Win Nwe Soe explains to 10 year old students the disaster safety booklet.
Credits: World Vision International – Myanmar
‘It was the worst flood ever recorded in our area’, recalled Daw Win Nwe Soe, Primary school teacher in Nwar Taung village, Thabaung Township, Ayeyarwady Region.
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ လူငယ်စင်တာများရှိ ဘဝကျွမ်းကျင်သင်တန်း - “ပျော်ရွှင်မှုကို ခံစားရတယ်။ မျက်လုံးတွေကို မှိတ်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်မိတယ်”
မာရယာနာာ ပါလက်ဗရာ ရေးသားသည်
ပေါက်တောမြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မတ်လ ၂၀၁၆ - သူမရဲ့ နာမည်က ပန်းလေးတစ်ပွင့်ရဲ့အမည်ဖြစ်ပြီး အမြဲတမ်း အပြုံးပန်းဝေနေသူလေးဖြစ်သည်။ သဇင်ဆိုသော မိန်းကလေးသည် လူဦးရေ ၈၀၀ ပင်မရှိသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ပေါက်တောမြို့က ကျောက်ပျဉ်ဆိပ်ရွာတွင် နေထိုင်သည်။
သဇင်သည် သူမ အနှစ်သက်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကျေးရွာလူငယ်စင်တာမှာ နာရီပေါင်းများစွာ ကုန်ဆုံးလေ့ရှိသည်။
Labels: adolescents, Rakhine State, UNICEF Myanmar, Youth Center, youth participation
Life skills training at Youth Centres in Rakhine: “I feel happiness, I close my eyes and I start dreaming”
Pauktaw, Rakhine State, March 2016- She has the name ofaflower and carriesapermanent smile. Thazin (literally, “royal orchid”) lives in Kyauk Pyin Seik,avillage in Pauktaw Township, Rakhine, with less than 800 habitants.
Thazin spends hours in one of her favourite places – the village Youth Centre.
Life skills trainings are being implemented in all eight youth centres run by DRC and supported by UNICEF in Rakhine, benefitting around 470 adolescents
အမျိုးသား ပိုလီယိုဆေးတိုက်ကျွေးရေးအစီအစဉ် - ဓာတ်ပုံစုစည်းတင်ပြမှု
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်မှ ၂၂ ရက်အထိ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ရှိသော ကလေးငယ် ၄ ဒသမ ၆ သန်းခန့်အတွက် မြို့နယ်ပေါင်း ၃၃၀ တွင် အမျိုးသားပိုလီယိုရောဂါကာကွယ်ရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်ရန် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအား ယူနီဆက်ဖ်နဲ့ ဒဗလျူအိတ်ခ်ျအိုက ထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့သည်။ ယင်းအစီအစဉ်တွင် ရိုက်ကူးထားသည့် ဓာတ်ပုံအချို့ကို တင်ပြလိုက်ပါသည်။
Labels: child Health, communities, Kachin Sate, Kayin State, National, Polio Campaign
National Polio Vaccination Campaign: Photo Gallery
From 20 to 22 February 2016 UNICEF and WHO supported the Ministry of Health to conductanational polio vaccination campaign in all 330 townships of Myanmar, targeting around 4.6 million children from all over the country. Here some of the pictures from the massive campaign.
Labels: children, health, photo story, Polio, UNICEF Myanmar, vaccination campaign
သားဖွားဆရာမတစ်ဦး၏ ဇာတ်လမ်း - မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်...
Story ofaMidwife: Changing Lives in Remote Villa...
ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းကြောင့် စာသင်ခန်းများ ပိုမိုကော...
School renovation provides better learning spaces ...
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ လူငယ်စင်တာများရှိ ဘဝကျွမ်းကျင်သင်...
Life skills training at Youth Centres in Rakhine: ...
အမျိုးသား ပိုလီယိုဆေးတိုက်ကျွေးရေးအစီအစဉ် - ဓာတ်ပံ...
National Polio Vaccination Campaign: Photo Galler...